UJOE STRUMMER: UJOE STRUMMER 001 UPHONONONGO LWEALBHAMU - IINDABA
UJoe Strummer 001
Olu qoqo lwengoma ezingama-32 ludibanisa ii-rarities eziphinda zenziwe kunye nokungahambelani. Ngaphezulu kokuqokelelwa kwabaqokeleli, nangona kunjalo, inika ikholaji eyamkelekileyo yomoya ongazinzanga, ovelayo.
Dlala iTrek URose ka-Erin -UJoe StrummerUkuhamba SoundCloud
Ixesha alizange libe yesuti eyomeleleyo kaJoe Strummer. Kungaphelanga nonyaka emva kokuba iClash yaqhekeza i-States ephezulu ye-10 ngo-1982, kunye neRock iCasbah inyuka kwiNombolo 8 ngomhla Ibhilibhodi Kushushu i-100, uStrummer wagxotha iqabane lakhe, uMick Jones. Endaweni yokutsala iplagi kwi Ibhendi ekuphela kwayo ebalulekileyo , wakha wajikeleza iminyaka embalwa, ebambelela kwiClash ixesha elide ngokwaneleyo ukuba ahlukanise nabalandeli bakhe be-hardcore nge-1985's incoherent Sika ubuqhetseba . UStrummer wakhupha i-albhamu eyedwa ngo-1989, xa abantu base-UK nabase-US babengenamdla kakhulu kumhlaba wakhe. Xa ipunk uyenzile ukubuyela kwezorhwebo phakathi kwiminyaka yoo-1990, iinzame zakhe zokudibanisa ukungqubana kwawa phakathi. Wayengakwazi ukuhlanganisa elinye iqela elifanelekileyo ade enze iMescaleros ngasekupheleni kweminyaka elishumi. Kanye xa baqala ukubetha umjikelo wabo, uStrummer wabulawa sisifo sentliziyo ngoDisemba 22, 2002. Wayeneminyaka engama-50 kuphela.
Kukhululwa phantse iminyaka eli-16 emva kokufa kwakhe, UJoe Strummer 001 -Ukuhlanganiswa kwengoma ezingama-32 zezinto ezinqabileyo nezingazange zikhutshwe ngaphambili-kuyaqhubeka nokuhamba kwexesha elibi, kuvela okomzuzwana xa inkumbulo ye-Clash ivele ikakhulu kwii-albhamu ezinkulu zeAll Time. Nangona kunjalo ukungabikho kukaStrummer kwintetho ephambili kusebenza endaweni UJoe Strummer 001 . Kufika phantse akukho kulindelweyo, gcina kwabo bantu bafa ngokukhawuleza ukuba baqokelele la masuntswana kwiminyaka edlulileyo kwaye benethemba elide lokuba ukurekhodwa kukaStrummer kweefilimu ezifihlakeleyo ze-indie ezinje USara Driver ka-1993 Xa iihagu zibhabha izakukhululwa.
UJoe Strummer 001 uyayifeza loo mfuno yabaqokeleli, kodwa ingaphezulu kokunye ukusetyenziswa koncedo. Ukujonga ubalo maxesha lwekholaji, UJoe Strummer 001 ipeyinta umzobo ocacileyo kunye nobunzima beStrummer njengoko wayekho ngaphandle kweClash. I-CD nganye ivula ngohlobo lweLetsgetabitarockin, intwana encinci kaNick Chuck Berry awayibhalela iqela lakhe lokuqala, i-pub rockers i-101’ers. Yindlela efanelekileyo yokuvula. Nokuba uStrummer uzulazule kangakanani ebomini nasemculweni — ecula uBob Marley noJohnny Cash, bezixakekisa ngesingqi seAfrika, kwaye befaka i-R & B yaseNew Orleans ngexesha lotyelelo olwandisiweyo eSpain naseCalifornia-wayehlala ehleli e-rock'n'roll.
Ngelixa uStrummer eqala umsebenzi wakhe wokucula ilitye le-retro, wayetyiwa kukuqonda ezinye iinkcubeko, zona UJoe Strummer 001 icacisa. Ukuxutywa phakathi kwe-elastic reggae, i-Irish folk, ilizwe le-cinematic, i-boombox hip-hop, kunye ne-pseudo-jazz, ingqokelela ibonisa imvumi / umbhali wengoma engenasiphelo kumava amatsha, indlala ebangelwa kukuwa kweClash. Ngaphandle kwebhendi, wayekhululekile ukuba ajoyine abalawuli uAlex Cox noJim Jarmusch kwiiseti zemiboniso bhanyabhanya engaqhelekanga, enikela ngeengoma ezimbalwa kwaye evele nakwisikrini.
Kwi Ingoma yokuBuyisa: IBallad kaJoe Strummer , umbhali ngobomi bomntu uChris Salewicz uthi uStrummer wabandezeleka kuxinzelelo ngeli xesha. Okwangoku, lo mculo uyadlamka kwaye awusoze udwelise, ufumana ubomi kwimiphetho yawo erhabaxa kunye nokurekhodwa okungacacanga. Ixabiso eliphantsi libonisa amandla, ngokungathi iStrummer ifuna nje ukufumana ezi ngcinga phantsi ngokukhawuleza. Ngenxa yeso sizathu, iziqwengana zolu lwazi zinokubonakala zingenabungozi, kwaye zingaphelelanga. Iingoma ezithile ziyaphindwa, kwaye iingoma ziphinde zabuyiselwa. Eso setyhula siziva sidibene nobuchule bukaStrummer. Wayehlala esebenza ebuyela kwiziseko, ebhala ii-rave-up kunye nokuntywila kwindawo yokomoya xa ezinye izimvo zazisilela.
Umdibaniso onemiphetho erhabaxa ihlala iphondo lotshintsho, kodwa UJoe Strummer 001 icacisa ubumnandi belitye ngendlela efundisayo kwaye ikhuthaze ii-neophytes. I-Clash yayingu-omnivorous kwaye inomdla, kodwa ukuqhelana kwabo ngamanye amaxesha kungathulisa uluvo lwabo lokuzonwabisa kunye neemvakalelo. Akunjalo apha. I-Strummer yamkela ezinye iinkcubeko, yenza iMfazwe yeLatino Rockabilly yexesha elifutshane ngo-1988 Ingxelo esisigxina i-soundtrack, erekhodwe neePogues phantsi kwe-Astro-Physicians ezifihlakeleyo, kwaye yaphinda yahlangana nomlingane omdala uMick Jones ukwenza ihip-hop engakhange ifane neClash. Umnqweno wakhe ongapheliyo kunye novelwano olungenasiphelo lunika lo mculo uqingqiweyo ukuba ube sisiseko esinamandla. Umsebenzi kaStrummer wawububungqina bemida evulekileyo kunye neentliziyo ezivulekileyo. Ngelixa uvelwano olunjalo lusenokuba luphume kwifashoni, umculo ongaxolanga, omdaka kaStrummer ngoku uvakala ngokungxamisekileyo kwaye uyimfuneko.
I-logic kwi-rick kunye ne-morty
ukukhula bruce springstein
lil uzi vert uhlobo
ngokuchasene nam! I-transgender dysphoria blues
Abazalwana beekhemikhali q tip